Qeybta 1: windows media player ma ciyaari karo DVD Blu-Ray Waa maxay sababta?
Qeybta 2: waa maxay cajalladaha Blu-ray baraha iyo Windows XP, cajalladaha Blu-ray?
Qeybta 3: Players Media Alternative si media player Window
Ray Blu waa qaab disk ah digital indhaha ka dhigaya hubiyo in xogta lagu kaydiyaa habka ugu wanaagsan ee suurto gal ah si user ah arki kartaa waxyaabaha ku jira. Si ka duwan DVD qaab tani ayaa loo sameeyey si loo hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah qiimaha lagu kaydiyo xogta tahay oo kale oo ay hubisaa in content la ilaaliyo muddo dheer. Disk waxa loo sameeyay si loo hubiyo in qaab DVD la bedelay iyo ugu fiican ayaa la siiyaa si ay u user ee foomka of kaydinta ah waa la isku halayn karo iyo sidoo kale waarta.
Waa su'aal aad u fudud oo jawaabtu tahay in user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in ka siib-in la xiriira ayaa la rakibay si ay ugu fiican ee loo arko iyo user wuxuu sidoo kale uu helo ugu wanaagsan ee reer ciyaaryahanka Timid OS ah. In si kale loo dhigo user ay u baahan tahay in la hubiyo in qaybaha la xiriira in looga baahan yahay inuu ka ciyaaro DVD ray Blu rakiban yihiin gal drive adag si user ciyaari karaa qaab fudud oo ku qanacsan. Si aad u hesho natiijooyinka ugu fiican waxa ay sidoo kale waa in la ogaadaa in user waa in akhri tutorial this ilaa dhamaadka si ay u helaan fikrado dheeraad ah.
Si looga fogaado burcad badeedda iyo isticmaalka sharci darrada ah ee warbaahinta oo uu soo kaydiyaa badan disk ku ray Blu waxaa Windows XP si kaliya qalab khaas ah sida ciyaartoyda ray Blu Hubi in ka dhigi kartaa in xogta la akhriyo iyo ruuxaanta kale ee arrintan la xiriira gebi ahaanba ku guuldareysato. Dhinaca kale marka user a waa inuu xaqiijiyo in ray ah disk Blu wuu dildillaacay si aad u hesho macluumaadka si loo isticmaali karo in ay helaan nooc lacageed ama mid ka mid ah faa'iido ka dibna ray disk Blu ayaa la sheegay in lagu decrypted sida haatan waxan disk awooddo waxaa la ciyaari oo ka kooban ayaa waxaa lagu dhawaaqi karaa in ka badan dhexdhexaad ah wax kasta oo aan arin kasta.
Waxaa jira tobanaan kun oo ciyaartoyda in lagala soo bixi karo oo ray ah disk Blu lagu ciyaari karaa iyadoo la isticmaalayo farsamada ee gundhig. Tani waxay qayb ka mid ah tutorial inay hubiyaan in user helo ciyaartoyda ugu fiican in ay taageeraan technology markuu u yimid in ay ka qeyb software iyo habka ka dhigi doonaa. Ciyaartoyda in lagu soo bandhigay halkan ay yihiin kuwa jira gobolka of farshaxanka iyo sabab la mid ah waxaa sidoo kale in la xusay in user ah waa in la hubiyo in ugu fiican ayaa loo gudbiyey in nidaamka iyo sidoo kale habka la xiriira in uu yahay isagoo yahay ciyaaray arrintan la xiriira in la hubiyo in taageerada ray Blu lagu helay in sida uga wanaagsan ee suurto gal ah. Tani waxay qayb ka mid ah tutorial ka dhigi doonaa in la hubiyo in user helo ugu wanaagsan ee reer arrin ku ciyaartoyda kale ah in ay tahay in la soo bixi halkii windows media player sida ciyaartoyda waa kuma gobolka kaliya ee farshaxanka, lakiin waxa ay sidoo kale waxaa lagu qiimeeyo sare by users ee arrintan la xiriira. Waxaa sidoo kale wuxuu hubiyaa in user helo natiijada ugu wanaagsan iyo kuwa ugu fiican ayaa la siiyaa si ay nidaamka aan ciyaaryahanka ray Blu loo baahan yahay iyo kor ku xusan oo dhan natiijooyinka in lagu ahbaa jira cabsi badan oo gobolka ka mid ah tahay in arrintan la xiriira. Waxa ugu muhiimsan labo ciyaaryahan oo loo isticmaali doono si ay u muujiyaan awoodooda waa sida soo socota:
Sida doorashada ayaa muujinaya in ciyaartoyda ugu fiican si heer sare ah waxaa lagula talinayaa dhammaan dadka isticmaala si aad u hubiso in ciyaartoyda waxaa lagala soo bixi oo lagu rakibay si loo hubiyo in user helo ugu wanaagsan ee reer functionalities iyo sidoo kale guud ahaan awoodooda ciyaareed oo ka mid ah ciyaartoyda. Waxaa sidoo kale in la xuso in ciyaartoyda waxaa mar kasta qiimeyn sare by users iyo sidaa darteed waa in aan la sidoo kale ku rakiban oo kaliya ray Blu bixinta laakiin ciyaaro iyo sidoo kale si loo hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijooyinka tahay waa helay arrintan la xiriira. Qaybta dambe ee tutorial inay hubiyaan in muuqaalada iyo functionalities ayaa waxaa sidoo kale sharaxay in buuxa marka ay timaado ciyaartoyda in lagu xusay in arrintan la xiriira ka dhigi doonaa.
Weli ciyaaryahan kale oo awood leh oo cajiib ah in la soo saaro si loo hubiyo in qaab DVD nooc kasta oo ku sifayn waxaa ciyaaray oo aan wax arrintan iyo dhibaato. The functionalities guud ayaa sidoo kale mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo ciyaaryahanka sidoo kale wuxuu hubiyaa in user helo natiijooyinka ugu fiican waqti ma at dhan gudahood. The rakibaadda iyo tilmaan la xiriira ciyaaryahanka ugu fiican iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in xitaa user Waa inuusan ku rakiban kartaa oo ay isticmaalaan ciyaaryahanka fudayd iyo qanacsanaanta sida waxay u baahan tahay ma barnaamijyo dheeraad ah ama downloads iyo qof walba oo wax ayaa gundhig ka hor rakibo si aad u hubiso in user helo natiijada ugu wanaagsan ka kaaftoomi badan aan. Mid ka mid ah qaababka ugu horumarsan ee ciyaaryahanka inuu xaqiijiyo in user a doorteen luqadda iyo Cinwaan aan ugu galaan menu disk taas oo run ahaantii xiddig ka.
> Resource > Windows > aan ka ciyaari karaa Blu-Ray windows media player?